I-loft yesimanje e-Interlaken Center - I-Airbnb
I-loft yesimanje e-Interlaken Center
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Michael
Ifulethi lesimanjemanje elisezingeni eliphezulu enhliziyweni ye-Interlaken. Ikhaya lakho kude nasekhaya.
Ifulethi lisanda kwakhiwa, lisha futhi ligcwele ukukhanya. Inekhishi eliphelele lokupheka, indawo yokuhlala evulekile (i-TV, usofa nendawo yokudlela), imibhede emibili ehlukene kanye nempahla yokuwasha. Ifulethi lilungele umndeni wabangane abane noma iqembu elincane, abazisa indawo yokuhlala esezingeni eliphezulu futhi abafuna ukuba senkabeni yedolobha phakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo ukuya ezindaweni ezikhangayo.
Ifulethi lesimanjemanje, elinesitayela samaleveli angu-2 eliqhele ngetshe ukusuka enkabeni ye-Hohematte Park. Kuleli fulethi kunombhede omkhulu wenkosi (180 x 200cm) otholakala phezulu (izinga le-mezzanine) kanye nepulani evulekile yokuhlala / indawo yokudlela enekhishi elihlome ngokuphelele. Igumbi lokugezela kanye nombhede we-bunk itholakala ezingeni eliyinhloko.
Ngicela uqaphele! Ngenxa yesikhala esilinganiselwe, umbhede ongaphezulu we-bunk ulungele ingane kuphela.
ubusuku obungu-7 e- Interlaken
Ifulethi lisendaweni ekhethekile, khona kanye enhliziyweni ye-Interlaken, ngombono we-Interlaken edumile "Höhematte". Ungafinyelela izindawo zokudlela ezinhle, izitolo ezinkulu nezitolo zabaklami ngaphansi kwemizuzu emi-2!
Ungazihlola ngokwakho futhi uhlole nge-keybox. Uma udinga okuthile noma unezinkinga, ungahlala usithinta nge-Airbnb. Sizokujabulela ukukusiza uma kudingeka, sihlonipha ubumfihlo bakho ngesikhathi esifanayo.